Isivumelwano se-UN sosizo eSyria - Bayede News
Isithombe: Greg Nash/NYTimes
NgoLwesihlanu uMkhandlu Wezokuphepha we-UN welule uhlelo lokuhlinzekwa kosizo lokuwela eSyria luvela eTurkey ngemuva kokuthi iRussia ivumile ukuthi kube nokuvumelana ezingxoxweni zomzuzu wokugcina ne-United States, nokuqinisekisa ukulethwa kosizo lwezigidi zabantu baseSyria kuze kube izinyanga eziyishumi nambili.
“Abazali bangalala namhlanje bazi ukuthi ezinyangeni ezili-12 ezizayo izingane zabo zizonakekelwa. Isivumelwano sobuntu esisifinyelele lapha sizosindisa izimpilo ngokoqobo,” kusho iNxusa lase-USA ku-UN, uLinda Thomas-Greenfield. IRussia ne-United States, obudlelwano babo bebugcwele izingqinamba eziningi, zombili zichaze ukuvota ngazwi linye langoLwesihlanu nguMkhandlu Wezokuphepha onamalungu ali-15 njengomzuzu obalulekile.
“Sithemba ukuthi kungenzeka kube yisikhathi sokuguquka esihambisana nalokho uPutin noBiden abakhulume ngakho eGeneva,” kusho iNxusa le-UN eRussia uVassily Nebenzia etshela abezindaba ngemuva kokuvota. “Kukhombisa ukuthi singabambisana lapho kunesidingo nalapho kukhona kuyintando futhi.”
UMengameli wase-USA uJoe Biden ubekhulume ngokubaluleka kokusebenza kosizo olunqamula umngcele noMongameli waseRussia uVladimir Putin ngesikhathi behlangana eGeneva ngoNhlangulana. Abaphathi bakaHulumeni kaBiden baxwayisa ngokuthi noma yikuphi ukubambisana okuzayo neRussia ngeSyria kungaba sengozini uma ukulethwa kosizo oluwela imingcele kuvalwa. “Kukhombisa ukuthi yini esingayenza nabantu baseRussia uma sisebenzisana nabo ngokuvumelana ngezinhloso ezifanayo,” kusho uThomas-Greenfield etshela abezindaba. “Ngibheke phambili ekufuneni amanye amathuba okusebenzisana nabantu baseRussia ezindabeni ezithinta bonke abantu.”
Umsebenzi womkhandlu womkhankaso wosizo othathe isikhathi eside ubuzophela ngoMgqibelo. UMkhandlu uqale wagunyaza ukusebenza kosizo olunqamula imingcele langena eSyria ngowezi-2014 ngamaphuzu amane, kepha lokho kwancishiswa ngonyaka owedlule kwaba iphuzu elilodwa ukusuka eTurkey kuya endaweni ebanjwe amavukelambuso eSyria, ngenxa yokuphikisana kweRussia neChina.
IRussia, umfelandawonye kaMengameli waseSyria uBashar Al-Assad, akazange abambe iqhaza emasontweni ezinkulumompikiswano ngesinqumo esabhalwa yi-Ireland neNorway ekuqaleni esasifuna ukuthola usizo eTurkey nase-Iraq izinyanga ezili-12. Kwathi ngoLwesine, iRussia yaphakamisa ukuvuselelwa kwezinyanga eziyisithupha kokuwela iTurkey kuphela.
Anathi Mtaka Jul 16, 2021